Semalt no manambara izay fahadisoana tokony hialanao amin'ny SMM
Ny mpanjifa amin'ny 2017 dia miandry ny fikambanana raharaham-barotra hifampiresaka tsy tapaka amin'izy ireoamin'ny tambajotra sosialy. Na izany aza, maro ireo orinasa e-varotra maro no mandiso ny fahombiazan'ny fampiroboroboana ny media sosialy sy ny Search EngineOptimisation (SEO) amin'ny fisarihana sy fitazonana mpanjifa.
Jack Miller, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia manasongadina fahadisoana lehibe telo ataon'ny orinasa rehefa manao fampielezan-tserasera amin'ny media sosialy.
1. Famoahana ny fampielezan-kevitra tsy misy tetikady mahomby
Zava-dehibe ny hampivelatra ny tanjon'ny haino aman-jery sosialy hanatsarana ny tetikady ara-barotra amin'ny aterinetoNy marketing marketing sosialy dia afaka manana tanjona marobe - swivel bucket seat bases. Ny tanjona iray dia mety hanatsara ny fanentanana ny marika eo amin'ireo mpanjifa voatokana. Tanjona iray hafa amin'ny fiarahamoninaNy mediam-pampahalalam-baovao dia mety hampiasa ny tambajotra sosialy hanolotra tolotra fanohanana ny mpanjifa. Ny tetikady tsara amin'ny media sosialy dia ahitana tanjona marobemanatsara ny fifandraisana amin'ny orinasa miaraka amin'ireo mpanjifa voatokana. Ny tetikady mahomby dia manana sehatra sosialy tsara.
Mamporisika ny orinasa mamokatra lamaody na fomba amam-panao sy fomba amam-panaoampiasao ny sehatra tambajotra sosialy Pinterest na Instagram. Pinterest dia manana fandefasana e-varotra izay ahafahan'ny mpanjifa mividy vokatra naserivisy amin'ny aterineto. Ny mpivarotra izay manolotra vokatra vita amin'ny varotra sy ny tolotra ataonao dia tokony hampiasa ny sehatra YouTube sy Facebook noho nyny fahafaha-mifampizara lahatsary ambony. Zava-dehibe amin'ny orinasa iray hampiroboroboana ny tambajotra sosialy.
Ny famoahana ny media sosialy amin'ny mailaka dia fomba fijery mahomby amin'ny fampiroboroboana ny media sosialytoerana ho an'ny mpanjifa voatokana. Hevitra iray hafa momba ny SEO fampiroboroboana dia manentana ny fampidirana ireo rohy media sosialy amin'ny tranonkalan'ny orinasa.
2. Tsy mety ny mihaino sy mamaly
Ny mpanjifa dia manome fanazavana foana momba ny vokatra sy ny tolotra omen'ny orinasafikambanana. Zava-dehibe ho an'ny fitantanana ny orinasa ny manintona. Misy fitaovana maromaro azo ampiasaina amin'ny fifandraisanany mpanjifa, ohatra, ny Social Mention sy Hootsuite. Na izany aza, voafetra ny fahafaha-manao. Noho izany, ny orinasa dia tokony hamalyho an'ireo hafatra avy amin'ireo mpampiasa.
Facebook dia sehatra media sosialy izay ahafahan'ny orinasa mandray andraikitra tanterakany hafatra avy amin'ireo mpanjifa voatokana. Miatrika fanamby maro ny orinasa rehefa manolotra tolotra sy vokatra. Afaka mampiasa ny tambajotra sosialyireo orinasa mba hampahafantatra ny mpanjifa momba ireo olana na fanamby amin'ny fizotran'ny raharaham-barotra.
3. Mijanona amin'ny fanandramana
Zava-dehibe ny fanandramana amin'ny asa ataon'ny tambajotra sosialy. Ny orinasadia afaka mampiasa fomba vaovao entina miaraka amin'ny mpanjifa. Ny lahatsary mivantana dia singa iray azo jerena ao amin'ny Facebook sy Instagram. Manatsara ny fotoana izy iofifandraisana eo amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa. Ny orinasa iray dia afaka mampahafantatra ny mpihaino maromaro momba ny vokatra vaovao amin'ny alalan'ny horonan-tsary mivantanaendri-javatra.
Ireo orinasa dia afaka mampiasa fampitaovana mivantana ihany koa amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fanentanana Facebook. Live-mivantanadia manintona mpihaino maro satria mifampizara ary mampiasa ny teny fototra SEO. Ireo mpampiasa media sosialy dia omena fahafahana hangatakafanontaniana sy fikatsahana fanazavana. Ny fivoriana mivantana mivantana dia ahafahan'ny orinasa hianatra avy amin'ny mpanjifa, indrindra any amin'ny faritrafanatsarana ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
Ny fampiharana ny SEO amin'ny fampiharana ataonao dia afaka manatsara ny ezaka ara-barotra amin'ny media sosialy. SEO manam-pahaizanadia afaka mampiasa teny fanalahidy mahomby amin'ny fampahalalam-baovao sosialy. Ny mpividy dia hahasarika ny hafatra izay manana fampahalalana mahaliana momba nyfahombiazana amin'ny vokatra na fanompoana.